Siidaa Ganaraal Taaddasaa Birruu Magaalaa Fichee Kichuu
HomeAfaan OromooRadioSiidaa Ganaraal Taaddasaa Birruu Magaalaa Fichee
– Siidaa Ganaraal Taaddasaa Birruu Magaalaa Fichee
– ”Namoonni ajjeefaman miseensa ABO leenjifaman dhiisii, deeggartootallee miti”
– jiraattota aanaa Gooroo Doolaa
– “Lafa gabbataa sanarraa ka’anii harka namaa eeggachuutti deebi’an…”
– Obbo Dachaasaa Beeekaa
“Finfinneen keenya” jechuun dhaadannoo bira wanti as darbe hin jiru.siidaan gooticha kanaa bakka dhaalota isaatti ijaaramuun gaarii ta’ullee,Garuu ijaaramuu kan qabu handhuura Oromiyaa Finfinneen keessatti.soodduu fi siidaan nyaaphaatu tarree galee Finfinneen keessa ijaajja kan Jagnoota Oromoo garuu tokkolleen achi keessatti dhaabbachuun maaf akka yakkaatti ilaallamee?
Opdo’n dhimma Finfinnee irratti gad jabeessitee hojjachuu qabdi.dhimmi daangaa magaalaa Finfinnees asiin dura torbaan tokko qofaaf haasa’amaa ture.amma garuu waa’ee mata duree sanaatu Namni Abbaa kanaa isaan jedhaa jiru tokkollee hin jiru.
Habashaan dhiitee,bariitee ajandaa haaraa nuuf uumaa akka nuti dhimma keenna irratti hin xiyyeeffanne jabaattee hojjataa jirti.Oromoo dammaqi yoo ati rafte eenyullee dhimma kee siif hin qabu.
Ormi lafa kee malee jireenya kee argaa hin fedhu
Jiraataa Aanaa Gooroo Doolaa kan ta’an Obbo Elemaa Barraaqoo ”Guyyaa sana magaalaa Daraaroo jedhamtutti dhiyaatee warra WBO fi mootummaa gidduutti waraanni baname” jedhu.
“Waraanni bilisummaa Oromoo konkolaataa waraana mootummaa fe’ee deemu gommaasaa rukutuun dhoosanii nama tokkos ajjeesan. Ergasii dargaggoonni gabaa deemanii fi gara ooyiruu isaanii deeman ajjeefaman” jedhan.
Dhukaasa booda waraanni mootummaa dargaggoota dhimmasaaniif gara magaalaa deeman lakkoofsaan ja’a ta’an qabanii fuudhanii deemanii bakka tokkotti ajjeesan jedhan Obbo Elemaan.
Waraana naannoo isaaniitti baname dhagahuun wayita ba’an rakkoon kun akka mudate dubbatu. Namoonni ja’a isaan biratti ajjeefamuu kan dubbatan Obbo Koommoon ajjeechaan raawwate suukanneesaa ta’uu himan.
Akka aanga’aan kun jedhanitti garuu namoonni ajjeefaman namoota nagaa osoo hin taane hidhattoota.
”Jalqaba warri riphee loltootaa karaa irratti eeganii raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii yeroo fudhatan, miseensa raayyaa ittisaa keessaa namni tokko lubbuun darbe.
“Kanarraa ka’uudhaan raayyaan ittisa biyyaa ofirraa qolachuudhaaf tarkaanfii fudhateen riphee loltoota dura dhukaasa banan keessaa namoonni kudhan ajjeefamuu odeeffannoon bakka sanarraa nu qaqqabeera” jedhan.
Riphe loltoonni jedhaman kunneen eenyudha gaaffii jedhu yoo deebisan, “akka uummatarraa odeeffannnoo dhageenyutti warra ABO Shaneedha” jedhan.
“Warri ABO shanee kun uffata nama nagaa [sivilii] uffatanii hidhannoo qabatanii yeroo raayyaan ittisa biyyaa socho’aa jiran dhukaasa irratti banan” jedhu.
”Kan nu dhibee jiru waraanni mootummaa namoota shakkuu malee adda hin baasu. Namoonni kunneen waraqaa eenyummaa qabu.”
“Waraanni garuu kana utuu adda hin baasin haleellaa raawwate. Waraana bilisummaa Oromooti kan jedhummoo soba dhugaarraa fagaatedha. Ijoolleen kunneen waraana mitii deggertootayyuu miti.”
Obboleessi Abbaasaanii fi Ilmi Obboleessa isaanii ajjeefamuu kan dubbatan Koonnoo Waaqoo ”namoonni ajjeefaman miseensota waraanaa osoo hin taane namoota ooyiruu isaanii qotatanii gara magaalaa deemaa turanidha” jedhu.
“Maatii kiyya keessaa namoonni ajjeefaman miseensa waraanaa miti. Namoota nagaatu na jalaa ajjeefaman” jedhan.
“Waan uummatni hin feene hojjechuu hin barbaannu” ABO
‘ABO’n waraana haaraa leenjisaa jira’
Jiraataama Aanaa kanaa kan ta’an Obbo Suleymaan Korommiis, obboleessi isaanii hangafti nama qotatee bulu nagaan manaa ba’ee, akka qabamee ajjeefame dubbatan.
“Dhukaasa irratti baname raayyaan ittisa biyyaa ofirraa qolachuuf dhukaasa baneen namoota kana ajjeeseera” kan jedhu dhageenye.
“Kana keessa ammoo namni nagaan kan lubbuun darbe jiraachuu danda’a, nuti garuu odeeffannoo qabnuun namoota hidhatanii uffata sivilii uffatanii dhukaasa banan akka ta’anidha” jedhu.
”Nageenya keenyaaf ammas ni sodaachaa jirra”
“Karaa baanee midhaan daassifannu hin qabnu, hin rukutamna jennee sodaanna” jedhu obbo Koonnoon.
“Ani mataan kiyya baabura midhaan daaku magaalaatti gateen taa’a. Uummaniillee tajaajila irraa argachaa hin jiru. Wafcoon kiyya cufameera. Akka malee sodaanneerra” jedhu.
”Waraanni Bilisummaa Oromoos ta’ee waraanni mootummaa faffaca’anii waan ganda keessa jiraniif of sodaachaa jiraanna” kan jedhan ammoo obboo Elemaadha.
“Nagaadhaan baanee galuu hin dandeenye. Namni rifatee karaarraa baqachuutti jira” jedhan.
Raayyaan Ittisa Biyyaa hojii idileef naannoo sana keessa akka socho’aa jiruufi sababa itti jiraattota nagaarraan miidhaa gahuuf hin jiru jedhu Obbo Yohaannis.